Wicitaanka Waxqabadka: Waa maxay CTA? Sideed Ugu Hormarin Kartaa Waxtarkooda?
Waxay umuuqataa wax iska cad marka aad weydiiso su'aasha, Waa Maxay Wicitaanka Waxqabadka ama CTA, laakiin inta badan waa fursad luntay ama fursad lagu xadgudbay oo lagu kaxeeyo akhristayaasha, dhagaystayaasha, iyo kuwa raacsan si qoto dheer uga qayb qaadashada magacaaga.
Waa maxay Wicitaanka Waxqabadka?
Wicitaanka ficilku wuxuu caadi ahaan yahay gobol shaashadda kaxeeya oo akhristaha ku riixaya inuu gujiyo si uu ula qabsado sumcad. Mararka qaarkood waa sawir, mararka qaarkoodna badhan, mararka qaarkoodna qayb loo habeeyay ee hantida dijitaalka ah. Ma aha oo kaliya bogagga yeelan kara wicitaan waxqabad, ku dhowaad nooc kasta oo ka mid ah waxyaabaha ayaa (oo badiyaa waa).
Khudbaddii ugu dambeysay ee aan ka jeediyay munaasabad isku xirka maxalliga ah, waxaan dadka u soo bandhigay inay iska qoraan warsideheenna bilaashka ah aniga oo u diraya farriin marketing ilaa 71813 - an wicitaan wax ku ool ah maaddaama mawduuca uu ahaa mid khuseeya qof walbana taleefannadiisa gacanta ayaa gacanta ku hayey intii uu khudbadda jeedinayey. Waxaan aragnay jawaab kafiican kuwaan marka loo eego dadka weydiisashada inay aadaan goobta oo ay iska qortaan.
Webinars-ku wuu (oo waa) inuu yeesho wicitaan ficil, qaab-hawleedku waa inuu lahaadaa mid wax ku ool ah wac talaabo (waa wax lagu qoslo tusaalaha hoose ee lumiyay fursadda qoraaga!), Soojeedintuna waa inay sidoo kale. Saaxiibkeyga ayaa had iyo jeer bixiya lacag-bixin bilaash ah oo lagu beddelayo kaararka ganacsiga ee ganacsiga dhammaadka bandhigyadiisa - wuxuu u shaqeeyey si fantastik ah. Ku riixitaanka qof soo dejin, diiwaangelin, taleefan, ama xitaa maqaal kale oo khuseeya wuxuu noqon karaa CTAs weyn.
Wax Walba Ma Loogu Yeedhayaa Wicitaan Ficil?
Maheli doontid qaybo badan oo maadooyin ah oo aan soo saareyno oo aan laheyn wicitaan ficil, laakiin waxaan wadaagnaa tiro tan ah la'aanteed. Maahan in wax kasta oo aad sameyso ay isku dayayaan inaad iibiso, qaar ka mid ah waa inay isku dayaan inay dhisaan kalsooni iyo amar labadaba hogaamiyaasha iyo macaamiisha. Had iyo jeer iibso waxay noqon kartaa mantra inta badan iibka iyo istiraatiijiyadaha suuqgeynta, laakiin iibintu sidoo kale waxay noqon kartaa isbeddel wadahadallada qaarkood. Sharcigayga suulka waa inuu markasta leedahay Wicitaan Waxqabad marka ujeeddadaadu tahay inaad qofka ku dhiirrigeliso ka qaybgal qoto dheer.
Sida loo Abuuro Wicitaano Wax ku ool ah oo Waxqabad ah
Waxaa jira habab la xaqiijiyay oo loo adeegsado wicitaano wax ku ool ah oo loogu talagalay istiraatiijiyadda waxqabadka. Waa kuwan qaar ka mid ah:
Ka dhig wicitaanadaada si ficil aad u muuqda - Meeleynta CTAs waa inay ahaataa mid u dhow ama la jaanqaadaysa diiradda akhristaha. Waxaan badiyaa CTA-yada u dhignaa midigta waxyaabaha aan qoreyno si daawadayaasha ay isha indhaha ugu qabtaan. Waxaa laga yaabaa inaan ku riixno xoogaa yar oo ah durdurrada si aan kor ugu qaadno heerka mustaqbalka. Goobaha qaarkood waxay dul sabeeyaan CTA si markaa akhristaha u rogrogo, CTA-ga ayaa iyaga la sii joogaya.
Ka dhig wicitaanadaada ficil fudud - Hadday tahay sawir ama dalab ku jira hadalkaaga, hubinta tilmaamaha inay fudud yihiin, iyo waddada kaqeybgalka ay fududahay waxay hubineysaa in tiro aad u badan oo dhagaystayaashaada ah ay soo wici doonaan, ama ay guji doonaan-ficilka aad ka codsatay. CTA-ku-saleysan muuqaal ahaan caadi ahaan wuxuu leeyahay a
Ka dhig ficilka cad CTA-gaaga. Ka faa'iideyso ereyada ficilka sida wicitaanka, soo dejinta, guji, diiwaangelinta, bilowga, iwm waa in laga faa'iideysto. Haddii ay tahay sawir-ku-saleysan CTA, waxaad badanaa kuwan ka heli doontaa badhanka aadka u kala duwan. Isticmaalayaasha websaydhka ayaa wax lagu baray inay gujiyaan badhamada, markaa sawirku si otomaatig ah ayuu isu diiwaangeliyaa inuu yahay waxqabad iyaga u muuqda inay qaadaan.
Ku Darso Dareenka Degdegga ah - Waqtigu makuu dhammaanayaa? Miyuu dalabku dhacayaa? Ma jiraan tiro kooban oo kuraas ah? Wax kasta oo gacan ka geysanaya ka dhaadhicinta akhristaha inuu tallaabo ka qaado hadda halkii markii dambe ay kordhin doonto heerka beddelkaaga. Ku darista dareenka degdegga ah waa qayb muhiim u ah CTA kasta.
Ku riix Faa'iidooyinka astaamaha - Shirkado aad u tiro badan ayaa ku faana waxa ay qabtaan halkii ay ka heli lahaayeen macaashka ay ka helaan macaamiishooda. Maaha waxa aad sameyso ee iibiya; waa macaashka ku sasabaya macaamilka inuu iibsado. Ma waxaad siineysaa fursad aad ku fududeyso waxyaabaha? Si aad u hesho natiijooyin deg deg ah? Si aad u hesho talo bilaash ah?
Qorshee Jidka loo beddelayo - Qoraallada barta, dariiqa badanaa waa la akhriyaa, eeg CTA, iska diiwaangeli bogga degitaanka, oo beddelo. Wadadaada ku noqoshada waxay noqon kartaa mid ka duwan laakiin aragtida iyo qorshaynta wadada aad jeceshahay inay dadku ku qaataan waxyaabaha aad ka kooban tahay ayaa kaa caawin doonta inaad si wanaagsan u qaabeyso oo aad waxbadan ugu badasho istiraatiijiyadda Wicitaankaaga Waxqabadka.
Tijaabi CTA-yadaada - Naqshadee noocyo badan oo CTA-yadaada ah si aad u ogaatid midka kaxeeya natiijooyinka ganacsiga wanaagsan. Mid ka mid ah si fudud kuma filna - shirkado aad u tiro badan ayaan waqti siinin inay siiyaan naqshado kale, hadal, midabyo, iyo cabbirro kale. Mararka qaarkood jumlad fudud ayaa qumman, waqtiyada kalena waxay noqon kartaa hibo firfircoon.
Tijaabi Bixintaada - Tijaabo bilaash ah, rar bilaash ah, 100% dammaanad qancin, sicir-dhimis try waa inaad isku daydaa xulasho dalabyo kala duwan ah si aad u soo jiidato kororka beddelaadda. Hubso inaad cabirto waxtarka guud ee kuwa bixiya ee laxiriira haynta macaamiisha, sidoo kale, in kastoo! Shirkado badani waxay bixiyaan qiimo dhimis xagga hore ah si ay u lumiyaan macaamilka dhammaadka qandaraaskooda.
Hubi macluumaad kale oo macluumaad ah oo aan wadaagnay wixii intaa ka badan Samee iyo Ha Sameyn Baaqyo Wax-ku-ool ah.
Tags: firfircoonaanta gifwac talaabougu yeer midab ficilugu wac goobta waxqabadkawac si qaab tallaabougu yeer cabirka waxqabadkaugu yeer ficilugu yeer ereyada ficilkactaBadhannada CTAgoobta ctaqaabka ctacabirka ctaereyada cta
Flurry: Falanqaynta Waqtiga-dhabta ah ee Codsiyada Moobaylka
Soo-helitaanka Goobta: Maareynta Ganacsiga ee Hantida Hantida
Waad ku mahadsantahay wadaagida talooyinka ololaha CTA ee wax ku oolka ah. Xaqiiqdii xulashada qaabeynta iyo midabka bogga wax badan baa ka jira natiijo fiican. Waxaan maareeyay ololeyaal dhowr ah runtiina way shaqaysaa.
Jul 19, 2017 markay tahay 1:52 PM
Istaraatiijiyaddan ganacsi ebook ololeynta xayaysiinta ebook waxay leedahay wicitaan ficil ah oo ficil ah. Halkii caadiga ahayd "Waxaan rabaa tan" ama "hadda soo dejiso!". Waxay qabatay dhagaystayaasheeda oo leh "HA LABAADO!”Badhanka qoraalka CTA.
Waan ka helay maadaama ay khusayso nuxurka buugga ebook (Adeegsiga dhaqdhaqaaqa isku xidhka ah ee kaydka caalamiga ah iyo US ADRs si loo saadaaliyo qiimaha saamiyada si sax ah ka hor intaan suuqyadu furmin.) Iyo dhagaystayaasheeda, taas oo ugu horrayn ganacsatada suuqyada saamileyda ah iyo kuwa jecel. Soo hel halkan.